Leafy Lane Cottage Stellenbosch - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMarleen
Indlu enamabali aphindwe kabini anomtsalane abekwe embindini kwindawo ezolileyo kwaye ifunwa ngummelwane. Indlela enamagqabi yigadi yabucala, ephangaleleyo & ephumlayo. Ikhitshi eyonwabileyo ixhotyiswe ngokupheleleyo. Iimbono ezintle zeentaba ukusuka phezulu. Kumgama wokuhamba womlambo i-Eerste, imbali yesitalato saseDorp kunye neendawo zokutyela. Indawo yokuthenga elula iyindawo nje yokulahla ilitye. Indawo yokungena yabucala / ukhusekile kwindawo yokupaka ezitalatweni / ukufikelela kwi-elektroniki. Ikofu yesihluzi inikezelwe.
Indawo enoxolo kwaye ihonjiswe kakuhle ngomxholo wendalo woMzantsi Afrika. Ungahlala phantsi usele ikomityi yeti ngelixa umamele iintaka zicula kwigadi enamagqabi. Ikhitshi egcweleyo eyonwabileyo yokuzenzela ukutya. Indawo yokuhlala epholileyo kwigumbi lokulala phezulu ukongeza ukusebenza kunye nendawo. Ikhitshi, indawo yokutyela kunye nendawo yokuphumla ezantsi inokwahlulwa ibe yindawo yokulala yesibini enesahluli segumbi elincinci. Yonwabela iimbono ezintle zeentaba zentaba iStellenbosch, iSimonsberg, iHelderberg kunye neJonkerhoek. I-Wi-Fi yokuthotyelwa. Ifanelekile izibini, iintsapho, abahambi beshishini kunye nabahambi bebodwa. Sinikezela nge-ambience yasekhaya.
4.81 · Izimvo eziyi-206
Indawo yokuhlala esecaleni komlambo i-Eerste ukuze uphumle emfuleni uhambe okanye ukubaleka. Indawo yokuthenga ngokulula ihamba umgama kunye nevenkile enkulu yeSuperspar kunye ne-deli kunye nazo zonke ezinye izinto eziyimfuneko.
Umbuki zindwendwe ngu- Marleen
Sinikezela nge-ambience yasekhaya kwaye ngovuyo sinikezela ngoncedo ukwenza ukuhlala kwakho kube ngamava akhumbulekayo
Akutshaywa kwi cottage